Geciken Otobüsler UKOM’un Gözetiminde - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliSurveillance အတွက်နှောင့်နှေးဘတ်စ်ကား ukom
Surveillance အတွက်နှောင့်နှေးဘတ်စ်ကား ukom
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
နှောင့်နှေးဘတ်စ်ကား ukon ငါ၏အကြီးကြပ်အတွက်
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာများစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကြီးကြပ်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏နိယာမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (NLA ငါ) ၏ဦးစီးဌာန,7/ 24 အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာအသွားအလာလမ်းကြောင်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်-oriented နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောပြန်လာရာအရပျကိုယူပြီးနေသည်နှင့်အတူချက်ချင်း, အစင်တာများအတွက်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်သတိပြုမိ်ရောက်စွက်ဖက်ရန်, အရေးကြီးသောအချက်များမှာနေရာချကင်မရာများနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်လိုက်ကြ၏။
ဆိုက်မှာဝန်ထမ်းများကကောက်ယူ NLA ယူနစ်စာရင်းစစ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူကျင်းပကြသည်။ ကြောင့်သမဝါယမအလုပ်ချိန်မှနံနက်ယံ၌အပြေးဘတ်စ်ကားများ၏ထွက်ခွာရှာဖွေတွေ့ရှိချို့ယွင်းချက်များနှင့်သတိပေးချက်များနှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်သောကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များပုံမှန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်နေကြပါပြီတွေ့ဆုံရန်ပါဘူးထိန်းချုပ်ထားရာငါ NLA ။ 153 လယ်ပြင်အဖွဲ့များနှင့် Call Center န်ထမ်းကားဖြင့်နာရီအလုပ်လုပ်ငါ Uko နှင့်အတူညှိနှိုင်းအတွက်လမ်းကြောင်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များရပ်တန့်ဖို့ချက်ချင်းကြားဝင်စဉ်ဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်မှုများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှနေကြသည်။
Instant စစ်ဆေး DONE
ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ NLA ဖွငျ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားကျေနပ်မှု၏အရည်အသွေး, အီလက်ထရောနစ်သေဆုံးသူစုဆောင်းခြင်းနှင့်ယာဉ်ခြေရာခံခြင်းစနစ်တစ်ခုနှင့်အတူကားထဲတွင်ချက်ချင်းကင်မရာကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ပါစေတော်မူ၏။ ဒါ့အပြင်အောက်ပါ Uko ငါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှောင့်အယှက်သောအသွားအလာသိပ်သည်းဆနှင့်အသွားအလာပြဿနာများနှင့်အတူမြို့ရဲ့အထင်ကရအဆောက်အ MOBESE ကင်မရာတည်ရှိသောကြောင့်လိုအပ်သောယူဆလျှင်ချက်ချင်းကြားဝင်ပေးနိုင်သည်။
အကောင်အထည်ဖော် Administration ပိတ်ဆို့မှုများ
အဆိုပါရှယ်ယာမှာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများအပါအဝင်နိုင်ငံသားများ၏မကျေနပ်မှုသည်, ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းမျဉ်းများမော်တော်ယာဉ်များ, ဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များစည်းမျဉ်းတွေ့ရှိသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစည်းမျဉ်းများကဆုံးဖြတ်တက္ကစီအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးချိုးဖောက်, တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုပိုင်ရှင်နှင့်ယာဉ်မောင်းရန်, အမှတ် 1608 5326 နှင့်ဥပဒေနှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုများလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု program နဲ့အညီနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမက start line ကို 16 / 04 / 2013 57.46 ကီလိုမီတာ Kadikoy-Kartal: အစဉ်အဆက်လိုင်းစနစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့်စတင်ခြင်းရထားလိုင်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးသည့်အစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ (21.66 ကီလိုမီတာ) 2011 လည်းအဆုံးသတ်ပေမည်။ အချိန်မီကျော်။ Bagcilar Olympic-: (15.8 ကီလိုမီတာ) 2012 အလယ်၌အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ သို့တိုင်ဖွင့်လှစ်စောင့်ဆိုင်း။ Üsküdar-Cekmekoy: (20 ကီလိုမီတာ) နောက်ဆုံး 2013 ပြီးဆုံးခံရဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရထားစနစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့်ဟက်စတင်ဘယ်တော့မှ: 51,5 ကီလိုမီတာ။ flat-တစ်လိုင်းပြေးရထား: (11 ကီလိုမီတာ) ။ 2012 ကိုလည်းစတင် 2013 လည်းအဆုံးသတ်ပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်သူမစတင်ခဲ့ပါဘူး။ Mid-24.5 ထံမှ Besiktas-Giyimkent-Bağcılar (2012 ကီလိုမီတာ), 2015 အစောပိုင်းအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ (25 ကီလိုမီတာ) ၏ Bakirkoy-Beylikdiüz 2013 မှာစတင်သည်, 2015 လည်းအဆုံးသတ်ပေမည်။ Bakirkoy-Bağcılar (9 ကီလိုမီတာ) ။ အစအဦး 2013, 2014 မှာ start ...
Izmit ၏ကုန်ကျစရိတ်လမ်းရထားဘယ်လောက်နှောင့်နှေးပါသလဲ? 28 / 06 / 2017 ဒါကြောင့်လည်းတစ်ရက်အပြည့်အဝ 550 မကုန်မီဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ် "634, တစ်ရက်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်" ။ Izmit 84 ရက်ပေါင်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလမ်းရထားအချိန်နှောင့်နှေး။ "Akçaray" ဟုအဆိုပါလမ်းရထားအားပေးပြီးမှနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်အလုပ်လုပ်မှပိုပြီးအလုပ်ရှိသေး၏။ အလွန်မပြည့်စုံစည်းမျဉ်းများအပေါ်လမ်းကြောင်းနံပါတ်များကို။ အဘယ်သူမျှမရပ်နားရာအရပျမြားနှငျ့အမြားအပွားကပိုပြီးစီးပွားရေးအတွက်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကလမ်းရထားအလုပ်ကိုလပေါင်းများစွာများအတွက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုအစဉ်အဆက်ကာလ၌ကိုလက်စသတ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ မြောက်မြားစွာဥပမာပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းရထားပြီးသားလေ့လာမှု၏အချိန်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မခံခဲ့ရပါဘူး။ စောင့်ပါ ... သို့သော်လည်းအများဆုံး izmitli ကြီးနှင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ကုန်သွယ်မှုခဲ့သည်။ အလွန်ခက်ခဲ ...
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပေါ်တွင်နယူးစည်းမျဉ်းများ ... နှောင့်နှေးအချိန်အတွက်လက်မှတ်စျေးနှုန်း၏ပြန်လာဝက် ... 19 / 09 / 2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, မူကြမ်းအဆင့်တွင်အဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူသစ်ကိုစည်းမျဉ်းများသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကိုပိုနှစ်သက်သူကိုရထားလမ်းခရီးသည်များ၏အခွင့်အရေးအတွက်အသစ်တခုဖွံ့ဖြိုးရေးကိုတွေ့ကြုံ။ ပင်သူမူကြမ်းအဆင့်တွင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောထင်မြင်ချက်များဝန်ကြီးဌာနကစည်းမျဉ်းများအရတော့တယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အကြိုနဲ့ post ခရီးသွားနှင့် liabilities ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များမှလေးစားမှုနှင့်အတူအခွင့်အရေးများစိတ်ပိုင်းဖြတ်နေကြသည်။ အဆိုပါခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကဆုံးဖြတ်အခြေအနေများအတွက်လွယ်ကူပြီးလက်အိတ်ရဖို့ယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောထိုခရီးသည်နှောက်ယှက်ခြင်းငှါအိတ်နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှခွင့်ပြုခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ ခရီးသည်အိတ်ကို၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရထား boarding ခရီးသည်ခံရဖို့ semi Return လက်မှတ်စျေးနှုန်း၏ရထားအော်ပရေတာ ...
တင့်တယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့မီထရိုနှောင့်နှေး 10 / 10 / 2012 1967 နှစ်ပေါင်း။ ကျွန်မအနေနဲ့အစောပိုင်းကနေ့စွဲကနေမွေးဖွားခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ရဲ့İstanbul'umuzdaကြောင့်အချိန်, အတွေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာစီစဉ်ထားဘယ်လောက်လှဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်။ ငါဒီအခြေအနေကို clipping သတင်းစာထဲကနေလေ့လာသင်ယူတယ်။ ကျနော်တို့နှောင့်အယှက်ဘယ်တော့မှသုတေသနလူသားတစ်ဦးသိမ်မွေ့နာကျင်မှုအရွက်ထိုသို့သောအမှုကိုမဝင်ခင်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကြုံတွေ့ရ။ သူကသမိုင်းအတွက်မြေအောက်ရထားများ၏ဆောက်လုပ်ရေးစဉ်းစားရန်စတင်ခဲ့သည်။ ငါမြောက်မြားစွာမက်ထရိုလိုင်းနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်ယနေ့ဆက်လက်ပါလျှင်ကမ္ဘာမြို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါစို့။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရပ်သားနေရာချထားဖို့ကန့်သတ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောအစ္စတန်ဘူလ်။ အကြောင်းကို 1.800.000 အနီးအနား၏လူဦးရေ။ အခြေအနေကိုကြောင်းဟောပြောမှုတွေနေ့စွဲအတွက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားထိုသို့သောမက်ထရိုလူဦးရေ။ ထဲမှာထုတ်လုပ်မှုတွေအများကြီးနှင့်အတူမက်ထရိုကြောင့် ...
နှောင့်နှေးရထားပဝါ 11 / 01 / 2019 မြူးနစ်နေထိုင်တစ်ဦးကဂျာမန်မိန်းမ, ရထားစီးအတွက်မဆိုနှောင့်နှေးသည့်ဖောက်အတွက်အဆင်းအရောင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့အတော်များများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခ၏နှောင်းပိုင်း-သွေးဆောင်ရှားပါးမှုကနေသင်တို့ကိုနိုင်ငံခြားသားများသွားကြသည်မဟုတ်။ နှောင့်နှေးနေထိုင်စဉ်ဖောက်ဇာထိုးကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်သွားပါမြူးနစ်, ဂျာမနီအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး, တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့နိဂုံးချုပ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 40 မိနစ်ကာလပုံမှန်အားဖြင့်ဖင်မိန်းမအားပူးတွဲအသွားအပြန်, သင်၏အချိန်ထက်ဘူတာရုံမှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကောင်းသောအလမ်းအတွက်သာအသုံးပြုခဲ့သည်စဉ် idly ထိုင်အစီရင်ခံစာ ATK ဂျာမန်မီးရထားသောဥပမာမှတ်ချက်ပြုချွတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဖောက်နှောင့်နှေး၏အရှည်ကိုကိုယ်စားပြုသုံးအရောင်ပါဝင်ပါသည်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဟုဆိုလေ၏။ ငါးမိနစ် ...
အဆိုပါပြဿနာ Ormanian Park မှာကြုံတွေ့ခံစားသည်မဟုတ်
ပန်းသီးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်လေ့လာစရာများ Continues
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု program နဲ့အညီနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမက start line ကို
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပေါ်တွင်နယူးစည်းမျဉ်းများ ... နှောင့်နှေးအချိန်အတွက်လက်မှတ်စျေးနှုန်း၏ပြန်လာဝက် ...
တူရကီမှလာ cable ကိုကားတစ်စီးဘတ်စ်ကား
အစ္စတန်ဘူလ်၏လမ်းများပေါ်တွင် Otokar ဘတ်စ်ကားကထုတ်လုပ်